नेकपाको त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलन : सरकार परिवर्तनदेखि पार्टी महाधिवेशनलाई समेत असर – मनोज सत्याल – JanaSanchar.com
नेकपाको त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलन : सरकार परिवर्तनदेखि पार्टी महाधिवेशनलाई समेत असर – मनोज सत्याल
संबाददाता : ओम हमाल	प्रकाशित मिति: (२०७६ जेष्ठ १७, शुक्रबार) १९:५२
गत वर्ष दसैंअघि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका थिए। त्यहीबेला पत्रकार ज्योति मल्होत्राले उनीसँग अन्तर्वार्ता लिइन्। मल्होत्राले प्रचण्डलाई सोधिन्- तपाईं र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल बाँडफाँड गर्ने सहमति भएको साँचो हो?
प्रचण्ड जवाफ दिए- हो, साँचो हो। सहमति नभएको भएसरकारको फेरबदलदेखि पार्टी महाधिवेशनलाई समेत असर पार्टी एकता कसरी सम्भव हुन्थ्यो।
मल्होत्राले फेरि भनिन्- के म नेपालको आगामी प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्दैछु?
प्रचण्ड केहीबेर अकमकिए। अनि भने- तपाईं त्यस्तो कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रचण्डको त्यो अन्तर्वार्ताबारे काठमाडौं खासै चर्चा भएन।
तर आठ महिनापछि त्यस्तै कुरा गरेको प्रचण्डको अन्तर्वार्ताले नेकपाभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याइदिएको छ।
पत्रकार ऋषि धमलालाई दिएको अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले ‘साढे दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सत्ता छाड्नु हुन्न भन्ने कल्पना गर्न चाहन्नँ’ भनेका छन्।
अन्तर्वार्तामा प्रचण्डले ओलीसँग तीन/चार दिनअघि खुलेर छलफल भएको बताएका छन्। उक्त भेटमा प्रचण्डले ओलीलाई ‘एकअर्कालाई दिएको भरोसा तोड्न नहुने,’ सम्झाएका छन्।
प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व बाँडफाँडको कुरा र भेटको कुरा एकसाथ उठाएका छन्।
ओली सहमतिबाट पछाडि फर्कने त होइनन् भन्ने संशयले प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद बाँडफाँडको प्रसंग बाहिर ल्याएको देखिन्छ।
प्रचण्डमा संशय बढ्नुको अर्को कारण पनि हुन सक्छ।
वैशाख ९ गते पार्टी स्थापना दिवसको कार्यक्रममा प्रचण्डले महाधिवेशनको प्रसंग उप्काए।
उनले ८ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन र एक वर्षभित्र महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने बताए।
प्रचण्डले विषय प्रवेश गराए पनि त्यसयता नेकपाका कुनै नेताले पनि महाधिवेशनको प्रसंग उप्काएका छैनन्।
प्रचण्डले एक वर्षको समय तोक्नुले उनी साढे दुई वर्षपछि सत्ता हस्तान्तरण हुनुअघि नै महाधिवेशनमार्फत् आफ्नो भविष्य सुनिश्चित बनाउन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ किनकी महाधिवेशनमा ‘गिभ एन्ड टेक’ को अवस्था बन्ने निश्चित हुन्छ। यदि पार्टी नेतृत्वबारे आफ्नो विषयमा कुनै सहमति नभए प्रचण्ड प्रधानमन्त्री पदको बाँडफाँडको सहमति अगाडि सार्ने पक्षमा देखिन्छन्।
के नेकपामा दुई अध्यक्षबीचको सहमतिमात्र निर्णायक हुन सक्छ त?
नेकपाभित्र यतिबेला त्रिकोणात्मक समिकरण छ। पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा रहेको अवस्थामा नेकपाभित्र यतिबेला सबैभन्दा शक्तिशाली प्रचण्ड नै छन्। नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा पूर्वमाओवादीका १९ जना छन्।
जबकी केपी शर्मा ओली र मावधकुमार नेपालको पक्षमा १२/१२ सदस्य छन्। केही नेता खुलेका छैनन्।
नेकपाको सचिवालयमा बादल, नारायणकाजी र वामदेव गौतमको साथ रहँदा प्रचण्ड शक्तिशाली हुनेछन्। बामदेव गौतमले पार्टीको स्थायी समितिको बैठकमा प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउन लिखित प्रस्ताव गरेका थिए। नौ सदस्यीय नेकपाको सचिवालयमा केपी ओली पक्षमा ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेल छन्। बरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल चुप छन्।
नौ सदस्यीय सचिवालयमा पाँच जना जता उभिन्छन्, राजनीतिक समिकरण त्यतै ढल्कनेछ। प्रधानमन्त्री ओली केही अघि स्वीट्जरल्याण्डको डाबोसमा भएका बेला प्रचण्ड, नेपाल, खनाल, गौतम र श्रेष्ठले झम्सिखेलमा छुट्टै भेला गरेका थिए। पाँच सदस्य एकातर्फ उभिएपछि ओली सशंकित बने। जसको असर नेकपाको पार्टी एकतामा पर्‍यो। एकता प्रक्रिया दुई महिना लम्बियो।
नेकपाको त्रिकोणात्मक शक्ति सन्तुलन सरकारको फेरबदलदेखि पार्टी महाधिवेशनलाई समेत असर पार्ने खालको छ। तीनमध्ये दुई नेता जता मिल्छन् नेकपाको भविष्य त्यसैले निर्धारण गर्ने देखिन्छ।
ओली र प्रचण्डबीच सहमति नभएको अवस्थामा माधव नेपाल नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण बिन्दुमा हुनेछन्। ओलीसँग सम्बन्ध बिग्रिए प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पाउन हुनेछैन। उनी सत्तामा फर्कन नेकपाको संसदीय दलको नेता फेर्नु पर्छ। त्यस्तोमा नेपालको साथ जता हुन्छ उही बलियो हुने अवस्था बन्छ। प्रधानमन्त्री बन्न नेपालको साथका लागि प्रचण्डले महाधिवेशनपछि पार्टीको नेतृत्व छाड्नु पर्ने हुनसक्छ। अथवा सत्ता हस्तान्तरण अघि महाधिवेशन हुने अवस्था बने प्रचण्डले अध्यक्षसँग प्रधानमन्त्री साट्नु पर्ने हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा ओलीसँगकै सहमति कायम राख्नु प्रचण्डका लागि फाइदाजक देखिन्छ।
किनभने नेकपाको महाधिवेशनसँगै उठ्ने वैचारिक प्रश्नले नेपाल र ओलीलाई एकै ठाउँमा ल्याउने वातावरण तयार पार्ने छ।
‘जनताको बहुदलीय जनवाद’को अडानमा दुई नेता एक ठाउँमा उभिनेछन्।
अर्कोतर्फ माधव नेपाल सकेसम्म पार्टीको नेतृत्व पूर्वमाओवादीको हातमा नजाओस् भन्ने चाहन्छन्। उनी प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिए पनि एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सुम्पन तयार छैनन्। गत निर्वाचनमा पाएको मतको हिसाब अनुसार पूर्वएमालेले ७२ र पूर्वमाओवादीले २८ प्रतिशत मत ल्याएकाले पनि पार्टी नेतृत्व छाड्न नहुने मत एमालेका नेता/कार्यकर्तामा छ। कार्यकर्ताको यो धारलाई मानेपालले नेतृत्व प्रदान गरिरहेका छन्।
यस्तोमा नेकपामा ओलीबाट प्रचण्डमा सत्ता हस्तान्तरण सहज छैन। महाधिवेशनसँग हुने ‘गिभ एण्ड टेक’ले सबैभन्दा धेरै अर्थ राख्ने देखिन्छ।
नेकपाभित्रको लभ हेट ट्राइएंगलमा कुन दुई पक्ष मिल्छन् भन्ने टुंगो छैन। जुन दुई पक्ष मिलेन पनि तेस्रो पक्षसँग हेटको सम्बन्ध हुने निश्चित छ।
सत्तासँगै नेकपाभित्र पार्टी नेतृत्व पनि लडाइँ छ। पार्टी एकता पूरा भइसकेको छैन। तर पोलिटब्युरो गठनमै खटपट देखिएको छ। बादलले आफूलाई क्रस गरेको ठानेपछि प्रचण्डले नेकपामा असुरक्षित महसुस गरेका छन्। त्यही भएर पोलिटब्युरो गठन नगर्न प्रस्ताव गरेका छन्। पोलिटब्युरो सदस्य सिफारिस गर्ने कार्यदलमा रहेका बादलले आफ्ना पक्षका नेतालाई बढी प्राथमिकता दिएका थिए। त्यसअघि पूर्वमाओवादीको भागमा परेको ६ वटा जनवर्गीय संगठनमध्ये ४ मा आफ्ना मान्छेलाई बादलले अध्यक्ष बनाएका थिए। बादल पछिल्लो समय ओलीसँग नजिकिएका छन्। जसले प्रचण्डको संशयको आगोमा घ्यू थप्ने काम गरेको छ।
त्यसो त ओली-नेपाल सम्बन्धमा चिसोपना आइसकेको छैन। ओलीले आफू पछाडि हट्ने अवस्था आउँदा नेपाललाई अगाडि सार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। यस्तोमा नेपालको नेतृत्वमा केपी ओलीले आफ्ना मान्छेहरूको राजनीतिक भविष्यको सुनिश्चितता खोज्न सक्छन्। यद्यपी यसले एमाले र माओवादी एकतामै प्रश्न खडा गर्न सक्छ।
नेकपाका पूर्वएमालेका नेताहरू महाधिवेशनलाई लिएर प्रचण्डको छलपटाहट सुरू भएको ठान्छन्। प्रचण्डले एक वर्षपछि हुने भनिएको सत्ता हस्तान्तरणलाई अहिले उठाउनुलाई उनीहरूले त्योसँग जोडेका छन्।
नेकपाका प्रधानमन्त्री केपी ओलीनिकट एक स्थायी समिति सदस्य प्रचण्डको छटपटाहट सरकारका लागि नभएको दाबी गर्छन्।
‘उनलाई सत्ताबाट मिल्ने लाभ मिलिरहेको छ, पूर्वमाओवादी मन्त्रीहरूले उनलाई ब्रिफिङ गर्छन्,’ ती नेताले भने, ‘यसबीच भारत, अमेरिका र चीन भ्रमण गरेका छन्। जिल्लामा जाँदा उनलाई प्रधानमन्त्रीपछिकै सम्मान मिलिरहेको छ। जहाँ गए पनि वरिपरि मान्छे जम्मा भएका छन्। प्रधानमन्त्रीले उनलाई साथ दिएकै छन्।’
ती नेता प्रचण्डको छटपटाहट पार्टीको नेतृत्वका लागि भएको तर्क गर्छन्।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल पार्टी एकताले नै पूर्णता नपाएको अवस्थामा अहिले नेताहरूबीच विभाजन देखिनु गलत भएको बताउँछन्।
‘एकताले पूर्ण आकार लिएपछि समिकरण बन्नु स्वभाविक हो। प्रचण्ड र माधव नेपाल वा प्रचण्ड र केपी ओलीबीचमा पनि समिकरण बन्न सक्छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘महाधिवेशनमा गएपछि रामबहादुर थापा बादल, माधव नेपालसँग मिल्न सक्छन् वा नारायणकाजी र ईश्वर पोखरेल उता समूहमा नअटेर आउँछन् कि! यो सबै भनेको महाधिवेशनमा पुगेपछि टुङ्गो लाग्ने कुरा हो।’
नेकपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले पछिल्लो पटक सार्वजनिक भएको सहमतिलाई गतल समयमा आएको बताएका छन्।
‘दुई जनाले सहमतिमा गर्ने निर्णय सिङ्गै पार्टीले मान्दै आएको छ,’ थापाले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘हिजोका कपाली तमसुकको आधारमा एकीकृत पार्टीले असान्दर्भिक र औचित्यहीन छलफल र निर्णय त शायदै गर्छ होला! किनभने, सत्यनारायणको पूजा भइरहेको बेला त्यही घरमा शोकको शंख फुकिनु शोभनीय मानिदैन! अस्थिरता निम्त्याउने गरी सार्वजनिक खपतका लागि बोलिनु असामयिक अभिव्यक्तिमात्रै हो।’ साभार सेतोपाटी
(२०७६ जेष्ठ १७, शुक्रबार) १९:५२ मा प्रकाशित